जुन 27, 2019 जुन 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, डाक्टर
एकपटक एउटा रोगी डाक्टर कहाँ पुग्छ तर त्यहाँ महिला देखेर फर्कन्छ । यो सिलसिला विगत ३ दिनदेखि चलिरहेको हुन्छ । उसले चाहेर पनि आफ्नो समस्या भन्न डराई रहेको हुन्छ । चौथो दिन जब पुन त्यो व्यक्ति त्यस क्लिनिकमा पुग्दा सधै झै महिला देखेपछि दिक्क मान्दै कुर्सीमा बसेको रहेछ । यो गतिविधि भित्रबाट यौन रोग विशेषज्ञले देखेर रोगी नजिक आएर बसेछ तर त्यो बिरामाीसंग बोलेको भने रहेनछ ।
आफ्नो अघि कुनै पुरूष आएर बसेको देखेपछिउसलाई बल्ल हिम्मत आएछ र सोधेछ । हजुर डाक्टर हो ? हजुर म डाक्टर हो भनेपछि बल्ल उसले आफ्नो बारेमा पटक-पटक फर्केदेखिको सवै समस्या बताएछ । अन्तमा, मेरो इज्जत हजुरको हातमा छ भनेछ । बास्तबमा उसको लिङ्गमा पिलो जस्तो घाउ आएको रहेछ । फुटाल्दा पनि अरू नर्स स्टाप बोलाउनुपर्ने भएकाले उसले एउटा योजना बनाएछ ।
योजना मुताविक विरामीलाई भित्र कोठामा गएर कपडा चेन्ज गर्न लगाएछ । अव छोएर उपचार गर्दा मेरो इज्वत राखिदिने बाचा गरेकाले नछोई उपचार गर्ने विचार गरेछ । कपडा चेन्ज गरेको थाहा पायपछि त्यो कोठामा नाङ्गै लेडिजलाई पठाइदिएछ । उता नाङ्गै लेडिजलाई देखेपछि यौन अंगमा उत्येजना आउनासाथ त्यो फोडा फुटेर सवै पिप बगेछ । यो कुरा डाक्टरले नाङ्गै गएकी महिलासंग सोधेछ । मेरो यौन अंग देख्ने वित्तिकै उहाँको अंग उत्तेजना भएदेखि फोडा फुटेको सवै बताइछ ।
यहाँ रोगीलाई सुई लगाउन पनि परेन अग प्रर्दशन पनि गर्नु परेन यो कथाले नेपाली चेलीहरूले महिला हुनुको भन्दा पुरूष जस्तै अंग प्रदर्शन गरेकाले नै नेपालमा बलत्कारको घटनामा वृद्धि भएको देखिन्छ । महिलाले आफ्नो अँग प्रदर्शन होइन सवै अँग ढाक्न सके बलत्कार जस्ता घटना नहुन सक्छ । यहाँ पुरूष मात्र दोशी होइन महिला पनि बराबर दोषी छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ । यदि त्यो स्थानमा महिला नभएको भए त्यो समस्या हल हुने थिएन ।
← एलर्जीका प्रमुख कारणहरु
टिमुरको उपयोगिता →
मे 13, 2019 मे 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक 9